Taleefan: +86 13459204925
Iftiinka Muuqaalka Qorraxda
Iftiinka Daadadka Qorraxda
Joojinta Nalalka Qorraxda
Nalalka CCTV Solar
0.8-5kw nidaamka qoraxda
Qorraxda Qorraxda La Qaadan Karo
Nalalka Nalalka Hoggaamiya
Indonesia ayaa sheegtay inaysan jirin dhir dhuxul cusub laga bilaabo 2023
Indooniisiya waxay qorshaynaysaa inay joojiso dhismaha dhirta cusub ee dhuxusha laga shido wixii ka dambeeya 2023-ka, iyada oo leh awood koronto oo dheeri ah oo laga soo saarayo kaliya ilo cusub oo la cusboonaysiin karo. Khubarada horumarinta iyo waaxda gaarka loo leeyahay ayaa soo dhoweeyay qorshahan, laakiin qaar baa leh ma ahan mid hami leh oo ku filan maadaama ay wali ku jirto dhisme ...
Sababta Waqtigu ugu habboon yahay Tamarta Cusboonaysiinta ee Filibiin
Kahor masiibada COVID-19, dhaqaalaha Filibiin wuxuu ahaa mid liita. Waddanku wuxuu ku faanaa heerka kobaca sanadlaha ah ee 6.4% tusaale ahaanna wuxuu ka mid ahaa liis heer sare ah waddammada la kulma koboc dhaqaale oo aan kala go 'lahayn muddo ka badan labaatan sano. Arrimuhu maanta aad bay u kala duwan yihiin. Sanadkii la soo dhaafay, ...
Horumarka teknolojiyadda qoraxda
Dagaalka ka dhanka ah isbeddelka cimilada ayaa laga yaabaa inuu xoog yeesho, laakiin waxay umuuqataa in tamarta cagaaran ee unugyada qorraxda silikonku ay gaarayaan xadkooda. Sida ugu tooska ah ee beddelidda hadda loo samayn karaa waa laydhka cadceedda, laakiin waxaa jira sababo kale oo ay u yihiin rajada weyn ee tamarta la cusboonaysiin karo. Furahooda ugu muhiimsan ...
Isku -uruurinta silsiladda sahayda caalamiga ah, kharashyada sii kordhaya waxay halis gelinayaan kororka tamarta qorraxda
Soosaarayaasha tamarta qoraxda ee adduunka ayaa hoos u dhigaya rakibidda mashruuca sababta oo ah kororka qiimaha qaybaha, shaqada, iyo xamuulka iyadoo dhaqaalaha adduunku uu ka soo kabanayo cudurka faafa ee coronavirus. Kobaca tartiib-tartiib ah ee warshadaha tamarta cadceeda eber-qiiqa waqti dawladaha adduunku ay isku dayayaan inay ...
Afrika Waxay U Baahan Tahay Koronto Hadda In Ka Badan, Gaar Ahaan Si Ay U Qabowdo Tallaallada COVID-19
Tamarta qorraxdu waxay soo uruurisaa sawirrada darfaha saqafka. Sawirka ayaa si gaar ah run uga ah Afrika, halkaas oo ilaa 600 milyan oo qof ay ka maqan yihiin koronto-awood ay ku sii hayaan nalalka iyo awoodda ay ku sii hayn karaan tallaalka COVID-19. Dhaqaalaha Afrika wuxuu soo maray koboc adag celcelis ahaan ...
Qorraxdu Waa Wasakh-raqiis oo waxay ku dhowdahay inay sii xoog badato
Ka dib markii ay diiradda saareysay tobanaan sano dhimista kharashaadka, warshadaha qorraxda waxay u weecinayaan fiiro gaar ah si ay horumar cusub ugu gaaraan teknolojiyadda. Warshadaha qorraxda ayaa tobanaan sano ku dhimey qiimaha korontada si toos ah looga dhaliyo qorraxda. Hadda waxay diiradda saareysaa samaynta darfaha xitaa ka sii awood badan. Iyada oo kayd ah waxaan ...
op shan dal oo soo saara tamarta qoraxda ee Aasiya
Awoodda tamarta qorraxda ee Aasiya ee la rakibay waxay aragtay koror ballaadhan intii u dhexaysay 2009 iyo 2018, taasoo ka kordhaysay 3.7GW ilaa 274.8GW. Kobaca waxaa inta badan hoggaamiya Shiinaha, oo hadda ka ah qiyaastii 64% awoodda guud ee gobolka ee la rakibay. Shiinaha -175GW Shiinaha waa soo saaraha ugu weyn ee ...
Kacaanka Tamarta Cagaaran: Tirooyinku Waa Macno
In kasta oo shidaalka fosilku uu awooday oo qaabeeyey waayihii casriga ahaa haddana waxay iyaduna qayb weyn ka qaateen qalalaasaha cimilada ee hadda jira. Si kastaba ha noqotee, tamarta ayaa sidoo kale noqon doonta qodob muhiim u ah la -tacaalidda cawaaqibka isbeddelka cimilada: kacaan tamar nadiif ah oo caalami ah oo saamayntiisa dhaqaale ay ...
Lixda Isbeddel ee Solar Solar Light
Qaybiyeyaasha, qandaraaslayaasha, iyo tilmaamayaasha waa inay la socdaan isbeddello badan oo ku yimaadda tiknoolajiyadda iftiinka. Mid ka mid ah qaybaha nalalka dibadda ee koraya waa nalalka aagga qoraxda. Suuqa iftiiminta aagga qoraxda ee adduunka ayaa la saadaalinayaa in ka badan labanlaab ilaa $ 10.8 bilyan marka la gaaro 2024, halka uu ka ahaa $ 5.2 bilyan sanadka 2019, ...
Baahida alaabta ceyriinka ah ee Litium ayaa si weyn kor ugu kacday; Kor u kaca Qiimaha Macdanta waxay Saameyn ku yeelan doontaa Horumarinta Tamarta Cagaaran
Wadamo badan ayaa hadda xoojinaya maalgashiga tamarta la cusboonaysiin karo iyo gawaarida korantada iyagoo rajeynaya inay gaaraan bartilmaameedyadooda kala duwan ee dhimista kaarboonka iyo kaarboonka eber, in kasta oo Hay'adda Tamarta Caalamiga ah (IEA) ay bixisay digniin u dhiganta oo ku saabsan sida loo ...
Nalalka cadceeda: dariiqa loo maro waaritaanka
Awoodda cadceedu waxay kaalin mug leh ka qaadataa dagaalka ka dhanka ah isbeddelka cimilada. Tiknoolajiyadda qorraxdu waxay ka caawin kartaa dad badan inay helaan raqiis, la qaadan karo, iyo awood nadiif ah si ay u noqdaan kuwo saboolnimo dhexdhexaad ah korna u qaada tayada nolosha. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale awood u siin kartaa waddamada horumaray iyo kuwa macaamiisha ugu badan ee fos ...
Silicon's 300% Surge wuxuu tuuraa Qiimo kale ...
Adeegyada korantada ee kor u kacaya waxay ka digayaan Yurub, kor u qaad ...
Waa maxay sababta waqtigu ugu habboon yahay tamarta dib loo cusboonaysiin karo ...
Cinwaanka: Maya .201, #31, Youshanmeidi Villa, Hexuli, Degmada Huli, Xiamen, Shiinaha
Taleefan: +86 13459204925 (John Liu)
Taleefan: +86 13123388978 (Eleanor Lin)
Laydhka Daadka ee Cadceedda Hoggaamiya, Nalalka Barkadda Dabaysha Cadceedda, Iftiinka Cadceeda, Qoriga Laydhka Wadada Cadceeda, Tooshka Cadceeda Ku Shaqeeya, Nalalka Qorraxda La Qaadan Karo,